यी ५ खानेकुरा खानुहोस, कमजोरी महसुस हुदैन ! |यी ५ खानेकुरा खानुहोस, कमजोरी महसुस हुदैन ! – हिपमत
यी ५ खानेकुरा खानुहोस, कमजोरी महसुस हुदैन !
अनार एन्टिअक्सीडेन्ट, एन्टिवायरल र एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरु भरपुर मात्रामा पाइन्छ। अनारले शरीरको रगतको मात्रालाई पनि बढाउँदछ। शरीरमा थकान महसुस हुनु, कमजोरी महसुसको मुख्य कारण भनेको शरीरमा पर्याप्त मात्रामा रगत नहुनु हो।